मलेसियामा लुटिएको कुमारत्व – Complete Nepali News Portal
April 12, 2017	29,881 Views
यतिबेला प्लेन मलेसियाको जमीनमा उभिएको छ, अर्थात केएलआइए एयरपोर्टमा छ अनि काठमाण्डौका लागि उडान भर्ने अन्तिम तयारी गर्दैछ । र, मचाहिँ बोडिङ्ग पासमा तोकिएको सिट च्यापेर ढुक्कले बसेको छु । प्लेनको नाम बताइदिउँ ? त्यो आफै थाहा पाउनुहुनेछ ।‘सिटबेल्ट बाँध्नुस ।’ -को निर्देशनसँगै प्लेनले भुई छाड्दै आकाशिँदैछ भने भर्खरै छाडेको जमीन सानो, अलि सानो, अनि सानो हुदै दृश्य-ओझेल हुदैछ । प्लेनले भुई छाडेको केही बेरमै म देखिरहेको छु,- आफ्नै टाउको सीधा माथि पिलिक्क बलिरहेको (सिटबेल्ट बाँधीराख्नु नपर्ने) सांकेतिक बत्ति र त्यो संकेतसँगै चुरीफुरी गरिरहेका एयर होष्टेजहरु । मलाई बोध हुन्छ,- ‘अव भने प्लेनले लिनुपर्ने उचाई लिएर आकाशको गती पक्डियो ।’
‘पाउँछ, पहिला फ्रेस त हुनुहोस्’ भनिराखेर परिचारिका वाम टावल सर्भ गर्न ब्यस्त देखिन्छे । लगत्तै वियर सोध्नेको अर्को उत्कण्ठ अभिलाषा चोटिलो गरी कानमा पर्छ- ‘आज झ्याप हुने गरी टन्न दिने हो ।’‘हो त ! त्यतिको पैसा तिरेको छ ।’ प्लेनभित्र वियर पिउने अर्को उकण्ठ आवाज पनि सुनिन्छ । त्यो सही थप्ने पनि उसकै सिट पाट्नर हुन्छ ।
म सुनिरहेको थिएँ,- आफ्नो देश फर्किएको एक महिनापछि दीयाले कल गरी । सन्चो बिसन्चो सोधी । अन्तमा भनी, मेरो महिनावारी रोकियो । भर्खर चेकअप गराएर घर फर्केको । गर्भ बसेको पक्का भयो । म तिम्रो बच्चाको आमा बन्ने भएँ ।’